LABSA WARAANA BILISUMMAA OROMOO – Oromedia
Home » Odeeffannoo » Oduu » LABSA WARAANA BILISUMMAA OROMOO
LABSA WARAANA BILISUMMAA OROMOO
April 2, 2019 @oromedia 0 Odeeffannoo, Oduu,
(Oromedia, 1 Ebla 2019) Akeekaa fi Kaayyoon Waraanni Bilisummaa Oromoo ijaarameef ifaa dha. Innis Bilisummaa fi Walabummaa Saba Oromoo kan boortaan sarbame boortaan deebisuudhan Kaayyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan Addi Bilisummaa Oromoo qabsaawuuf galmaan gahuu dha. Addi Bilisummaa Oromoo tarsiimoo qabsoo hidhannoo akka filmaata duraatti qabatee qabsootti hin seenne. Siyaasa Itoophiyaa keessatti balballi qabsoo karaa nagaa cufaa tahuu irraa daandii qabsoo hidhannoo filate. Akkasis tahee carraa argame hundumaan Kaayyoo qabsoo kanaa karaa nagaatiin galmaan gahuuf Imaammata ifaa fi balbala banaa qabaachaa yoona gahe.
Akka kanaanis yaalii yeroo adda addaatti gochaa turetti dabalee, ABOn Bilisummaa, nagaa fi dimokraasii dhugaa biyya Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti fiduuf murteeffatee Hagayya 07, 2018tti Asmaraatti Mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee irra gahe. Waliigaltee ta’eefis of-kenniinsa ol’aanaa agarsiisuudhaan yeroo tokkotti Hoogganoota ol aanoon, qondaalota gameeyyiin, deggertootaa fi hayyootni Oromoo kanneen qabsoodhaaf biyyoota ollaa fi biyyoota alaa turan biyyatti dacha’an. Miseensotni WBO Ertitrea turanis biyya seensifaman. Gama ABOtiin kun hundi erga tahee booda Mootummaan karaa nagaatiin ABO waliin hojjechuuf waadaa seene cabsee ABO fi Ummata Oromoo irratti duula waraanaa, hidhaa fi hacuuccaa siyaasaa gosa adda addaa gaggeessuu itti fufuun isaa qabsoo karaa nagaa jechuudhaan abdiin Mootummaan kun Ummataaf kennee ture kan dharaa fi goyyoomsaa akka tahe nuuf mirkaneessee jira.
WBO booji’amaa fi harka-kennataa fakkeessuuf yaalamaa jira. Mootummaa fi waraanni sirna qabuu fi Ummataaf dhaabbate tokko booji’amaa iyyuu hin hiraarsu, hin beelessu, wal’aansa hin dhorkatu, hin arrabsu, marsee waraanaan/qawweedhaan hin doorsisu. Mootummaan Ethiopia garuu miseensota WBO Dhaabni, Abbootiin Gadaa fi Haadholiin Siinqee itti kennan kophaatti galfatee hijaa duraan dirree lolaa irratti bahuu dadhabe itti bahuuf itti roorrisaa jira.
Miseensota WBO Ertiraa irraa galan keessaa kanneen lotummaan Oromiyaa ittisuu filatan maqaa leenjiin mooraatti qabee hiraarsaa fi yeroo isaanii gubaa jira. Kanneen hawaasatti dacha’anii qubatuu fi of jiraachisuu filatan waan murtaaweef dhorkatee gandatti geggeessee maatii jaraa fi ABO irratti akka irkataniif facaasee jira. Miseensota WBO harka isaa seenan irratti kana hunda raaw’achaa WBOn hafe galuu akka qabu mudhii hidhatee falma.
Mootummichi jibbansaa fi sodaa guddaa ABOf qabu karaa hundumaa dura dhaabbachuudhaan agarsiisaa jira. Irra deddeebiin ummattoota Itiyoophiyaa fi adduunyaa duratti kan kakatee fi abdachiise qabsoo karaa nagaa geggeessuu ABO fudhachuu dide. Waajjiraalee banuu diduu fi kanneen banaman cufuun, bilisummaa sochii miseensotaa fi deggertoota ABO daangessuu, Hoogganoota dabalee miseensotaa fi deggertoota ABO hidhuu, ummata Oromoo kanneen Dhaabichaa fi WBO deggeran ajjeesuu, saamuu fi qabeenya isaanii barbadeessuu hojii dhaabbataa godhate. Walumaagalatti waliigalticha faallessuun lolaa fi duula waraanaa fi olola miidiyaa, akkasumas hacuuccaa siyaasaa geggeesse; ittis jira. WBOn akkuma ajajjametti waliigalticha kabajuuf lola dhaabus mootummaan garuu WBO dhabamsiisuuf duuluu qofa osoo hin taane Ummata Oromoo ajjeesaa fi hidhaatti guuraa jira.
Mirga hiree murteeffannaa Saba Oromoo kan ABOn dhaabbatuuf balfisiisuuf duula olola farra mirga sabootaa fi sab-lammootaa oofaa tokkummaa Itoophiyaa kan mirga Sabaa fi sab-lammootaaf beekkamtii hin kennine faarsaa fi hafarsaa jira. Ejjennoon mootummaa kanaa kan of-tuultota sirna nafxanyaa duraanii irraa adda akka hin tahin haasawaa fi hojii warra dursaniitiin ifa bahaa jira. Mootummaa kanaan “Mootummaa Oromoo” kan jedhamu dhugaa irraa fagoo dha. Kan Mootummaan kun hojiidhaan lafa irratti agarsiisaa jiru caasaa fi sirna EPRDF kan waggoota 28 dabran Ummata hacuucaa, saamaa, hidhaatti guuree hiraarsaa fi ajjeesaa bahe itti fufsiisuuf hojjechaa jiraachuu isaa ti.
Waan taheefis, tarkaanfii furmaataa fudhachuun gaaffii yeroo fi dirqama seenaa tahee nutti mul’atee jira. Akka kanaan nuti Waraanni Bilisummaa Oromoo gama keenyaan waliigalteen Asmaraa fi sanaa asiitis akka hojiitti hiikamuuf gama mootummaa Itiyoophiyaatiin fedhii fi qophiin agarsiifamaa waan hin jirreef,
Maqaa “Qabsoo karaa nagaa” jedhuun mirga Saba keenyaa dabarsinee kennuu didne,
Wareegama Ummata keenyaa kan hanga yoonaatti baafame gatii dhorkinee harka kennachuu didne.
Bilisummaa guutuu Ummata keenyaa argamsiisuuf wareegama qabsoon kana booda gaafatu sodaachuudhaan mirgoota bubuutuu amma ittiin nu sobuu yaalaa jiranitti quufnee gantoota Sabaa wajjin dhiichisuu fi dhangaa yerootti hirmaachuu akka Bilisummaatti lakkaawuu didne.
Akka haalaa fi yeroon gaafatutti of qindeessinee murannoo ol’aanaan qabsoo keenya finiinsuudhaan Kaayyoo wareegamtoota keenyaa galmaan gahuun waan filmaata biraa hin qabne tahuu itti amannee murteeffanne.
Lammata deebinee haaraatti Mootummaa kanaan kan wal taanu yoo dhiibbaa malee qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf wabiin jiraatee fi WBOn sirna cehumsaa jalatti mooraa ofii keessa qubatee ABOdhaan bulfame/taligame qofa taha.
Murtii keenya kanaan qabsoo itti fufuuf akka gargaaruufis qaama AJAJA WARAANAA OL’AANAA WBO (AWO – WBO) jedhamu hundeessuu keenya labsii kanaan ifa goona.Qaamni kun (AJAJNI WARAANAA OL’AANAAN WBO) Hoogganoota ABO kanneen hubannoo fi ejjennoo WBO kanatti amananii WBO waliin dhaabbatanii fi ajajootii WBO Zooniilee fi Godinoota garaa garaa (Kibba, Dhiha, Baha, Giddu-Galeessa, Kibba-Bahaa fi Kaaba Oromiyaa) kanneen humni isaan hoogganan sadarkaa Cibiraa gahe of keessaa qaba. Fuul-duraafis ulaagaa kanaan ofitti dabalaa deema. Isaanuma keessaa geggeessitootni qaamichaa (Dursaa fi Itti Aanaan) filaman.
Haala danqaa Mootummichi tahe jedhee uumeen hariiroo fi qunnamtiin WBO fi Hoogganoota Finfinnee jiranii yeroo dheeraaf addaan citeera. Kun ammo gaafatama WBO Abbootii Gadaa, Haadholii Siinqee fi Ummata bal’aa Oromootti dabarsanii kennuudhaan dhimma keenya keessaa harka fudhatuutti geesse. Haa tahu malee , qaamni maqaa Abbootii Gadaa fi Haadholii Siinqeetiin gaafatama kana fudhates gaafatama kana bahachuu irratti hanqinoota hedduu qabaachuutti dabalee dhiibbaa fi doorsisa gama Mootummaan jiru irra aanuudhaan hojii isaa fiixaan baasuu akka hin dandeenye sochii isaa kan hanga ammaa irraa hubachuu dandeenyee jirra.
Adeemsi kun akkanumaan yoo itti fufe Qabsoo Bilisummaa Ummatni keenya wareegama ulfaataadhaan sadarkaa har’aa irraan gahe dhabamsiisee waanjoo gabrummaa fi cunqursaa Ummata keenya irratti deebisee jabeessuu danda’a yaaddoo jedhuu fi WBOn taligaa malee hadiyyoomfamee turuu hin qabu yaada jedhutu gara tarkaanfii kanaatti nu geesse.
Waan taheef, guyyaa labsiin kun labsame irraa eegalee Hoogganoota Finfinnee jiran wajjin hariiroo wal taliguu fi waliif taligamuu akka hin qabne ifa goona. Kanuma waliin akeekni keenya Kaayyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan ABOn hanga har’aatti qabsaawaafii jiru galmaan gahuu irraa kan hafe Dhaaba maqaa fi Kaayyoodhaanis ABO irraa adda tahe ijaaruu akka hin tahin hundaaf ifa goona. Jaarmota mirga Oromoo kabajsiisuuf qabsaawan kamiinuu dura kan hin dhaabbannee fi hin diinomfanne tahuu keenyas mirkaneessina. Kanneen haaluma fedhe keessatti bifa kamiinuu qabsoo bilisummaa ummata keenya bira dhaabbatanii fi mirga isaaniif falman maraaf galataa fi kabajaa qabsoo qabaanna.
Yaa Ummata Oromoo,
Qabsoon Bilisummaa wareegama qaalii fi ulfaataa itti baastee asiin geesse namootaa fi humnoota farra qabsoo keetii tahaniin booji’amee gara dabarfamaa jira. Nuti ilmaan kee (Waraana Bilisummaa Oromoo fi Qeerroo) dabalatee qabsaawotni jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti fiduuf wareegama haqaa baasanii qabsicha asiin gahan har’as akka diinaatti ilaalamanii moggaatti dhiibamuu, hidhamuu, adamsamanii ajjeefamuu fi gidiraa adda addaaf saaxilamuu irratti argamu. Namootatu barcuma irratti wal jijjiire malee sirni saamichaa fi cunqursaa EPRDF hin jijjiiramne. Inumaa iyyuu maqaa “Oromootu biyya bulchaa jira” jedhuun haqni kee alagaa qofa irraa osoo hin taane walii kee irraa illee akka dhokatuuf shirri qoqqoodanii bituu si irratti dalagamaa jira. Kutaa fi Gosaan si qoodanii gurmuu tokkummaa keetii diiguudhaan roorroo alagaa marsaa biraatiif si saaxilaa jiru.
Daba kana hunda osoo ilaallee agarruu hidhannoo keenya hiikkannee galuun Kaayyoo Jaallan nu biraa wareegamanii ganuu qofa osoo hin taane hegeree Saba keenyaa balleessuu dha. Waliigaltee fi Araara kabajaa fi kan Bilisummaatti hunda keenya geessu malee kan harka kennachuu, booji’amuu fi mana hidhaatti guuramuu hin fudhannu. Seenaa boonsaa Waraana Bilisummaa Oromoo fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan hanga har’aa diignee ofii jiraachuu irra falmachaa wareegamnee Seenichaa fi falmaa Bilisummaa dhaloota dhaalchisuu filanne.Filmaatni kun akka gatii nu baasisu wallaallee miti.Akkuma kaleessaa beela,daara,madaawuu fi ajjeefamuu gaafata.Utuu beeknuu,du’a ykn bilisummaa jechaa jirra.Mootummicha dabalatee hundi kan hidhataa fi of ijaaraa jiruuf Oromoo ittiin jilbeenfachiisuuf waan taheef hanga kun hin dhaabbannetti hidhannoo keenya hin hiikkannu.Ololaa fi duulli diinotaa kamuu nu hin jilbeenfachiisu. Waan dandeessuun nu cinaa dhaabbadhuu Bilisummaa keef qabsaawi. Daandiin nuti filanne xumurri isaa Inifannoo fi Bilisummaa hunda keenyaa akka tahu hin shakkinu !
Injifannoo Uummata Oromoof !
Bitootessa Ebla 1, 2019
Goblaa Hidhannoo ABO (Ajaja Waraanaa Ol’aanaa – WBO)
Previous: “Ofirraa ittisaa turre; amma afaan jarri beekaniin dubbisuun dirqii ta’e,”Jaal Marroo Dirribaa
Next: “በምዕራቡና በደቡቡ የአገሪቱ ክፍሎች ላይ ከኦነግ ጋር በተያያዘ ሰዎች እየታሰሩ መሆናቸውና አለመረጋጋት መኖሩ ከባድ ነው” አቶ በቀለ ገርባ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር